कर्मचारी सञ्चय कोषको ‘निशुल्क एसएमएस सेवा’ - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
कर्मचारी सञ्चय कोषको ‘निशुल्क एसएमएस सेवा’
चैत ०५, २०७४ 6937 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
कर्मचारी सञ्चय कोषले कोषमा आवद्ध सञ्चयकर्ताले रकम जम्मा गर्दा वा सापटी लिँदा यसको जानकारी एसएमएसबाट गराउने भएको छ । सञ्चयकर्तालाई आधुनिक सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यले यसो गर्न लागेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्दा वा निकाल्दा यसको जानकारी मोबाइलको एसएमएसबाट प्राप्त हुन्छ । यसरी सेवा दिँदा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको बचत रकम कट्टा गर्ने गर्छन् । तर, कोषले सञ्चयकर्ताको कोषबाट कुनै रकम कटौती नगर्ने भएको छ ।
एसएसएम सेवाबारे नेपाल टेलिकमसँग छलफल तथा परामर्श भइरहेको कोषका मुख्य अधिकृत राजेन्द्र काफ्लेले बताए । ‘सेवा दिँदा लाग्ने खर्च वा सेवा शुल्क सञ्चयकर्तासँग नउठाउने कुरा भएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘एसएमएसको सेवा शुल्क कोषले नै टेलिकमलाई तिर्ने गरी कुरा भइरहेको छ ।’
बैशाख १ गतेदेखि सेवा दिने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको पनि काफ्लेले जानकारी दिए । कोषमा अहिले ५ लाख ६० हजार सञ्चयकर्ता छन् । कोषले सञ्चित रकममध्ये अधिकांश हिस्सा सञ्चयकर्तामा नै लगानी गरेको छ ।
कोषले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । उक्त मुनाफा रकममध्ये ९२ प्रतिशत सञ्चयकर्ताकै हितमा खर्च भएको कोषले जानकारी दिएको छ ।
गत आवमा मुनाफा रकमको ८१ प्रतिशत सञ्चयकर्तालाई बाँडफाँड गरिएको छ । मुनाफा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सुरु मौज्दातको ०.७५ प्रतिशत वितरण गरेको छ । यस्तो रकम सञ्चयकर्ताको नाममा बेतन कर्णाली हाइड्रो पावर कम्पनीमा सेयर लगानीका लागि व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषमा हालसम्म २ खर्ब ५५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ स्रोत जम्मा भएको छ । उक्त रकममध्ये २ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको छ । अघिल्लो आवमा सञ्चित २ खर्ब २४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमध्ये २ खर्ब १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो ।